Dhinacyada ka qeyb galaya shirka Kenya oo isku khilaafay aayaha DKMG ee Somalia – SBC
Dhinacyada ka qeyb galaya shirka Kenya oo isku khilaafay aayaha DKMG ee Somalia
Waxaa maalintii labaad dalka Kenya ka socda Shirka wadatashiga ee qaramada Midoobay ay qabatay dowladda KMG iyo maamulada ka jira dalka Soomaaliya, waxaana shirka inta uu socday la isku khilaafay waqtiga dowladda KMG Soomaaliya.
Ka qeyb galayaasha shirka QM ee ka socda dalka Kenya ayaa isku fahmi waayay arigtidooda ku aadan waqtiga ay sii shaqeyn karto dowladda KMG Soomaaliya, iyadoo masuuliyiin ka tirsan ka qeyb galayaasha ay taageereen go’aankii waqti kordhinta ee Xukuumada KMG Soomaaliya.
Masuuliyiin ka tirsaneyd garab ka mid ah garabyada Ahlu Sunna ee Shirka ka qeyb galaya iyo Maamulka Galmudug ayaa shirka ka soo jeediyay in dowladda KMG loogu daro hal sano oo dheeri ah wixii ka dambeeyana laga tashada qorshaha kale ee lagu badali lahaa dowladda KMG Soomaaliya taasi oo ay ku qanci waayeen qeybaha kale ee shirka ka qeyb galayay.
Madaxdii ka socotay Maamulka Puntland ayaa shirka ka sheegay in loo baahanyahay in madaxweynaha dowladda KMG Soomaaliya iyo gudoomiyaha Barlamanka in ay doorasho aadaan xiliga uu dhamaado waqtiga dowladda KMG Soomaaliya bisha August ee soo socota.
Gudoomiyaha Barlamanka Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo wafdigiisa ayaa isku dayaya in ay ka dhaadhiciyaan qeybaha shirka ka soo qeyb galay gaar ahaan Puntland, Ahlu Sunna iyo Galmudug in ay ogolaadaan waqtiga uu ku darsaday Barlamanka KMG Soomaaliya.
Wariye Max’ed Cabdu Nuur Mascuud oo ku sugan goobta Shirka ayaa sheegay in caqabadaha shirka horyaala ay yihiin sidii loo mideyn lahaa fikradaha, waxaana gaba gabada kulanka oo maanta ku eg laga soo saarayaa bayaan dhowr qodob ka kooban.
Masuuliyiin ka tirsan Beesha Caalamka ayaa kulanka ku sugan kuwaasi oo iyagu qudhooda kala taabacsan maamulada kala arigtida duwan ee Soomaalida islamarkaana ka qeyb galaya Shirka wadatashiga ee Qaramada midoobay.